Angamba tsy misy anarana mahasosotra eto amin'ny tontolon'ny fitantanana sy ny lanjan'ny lanjany mihoatra noho i Gillian Michaels. Lasa nalaza izy noho ny fandraisany anjara tamin'ny fampisehoana an-televiziona amin'ny fahitalavitra amerikana miaraka amin'ny lohahevitra iray - ny ady amin'ny lanja maivana.
Raha tsy misy ny fifandirana, dia azo antsoina hoe manam-pahaizana manokana momba ny olana i Gillian Michaels. Na izany aza, izy dia maneho ny nofinofy Amerikanina - miasa mafy, mba hahatratra ny azy manokana. Izany no nataony, hatramin'ny fahazazany izay niadiany tamin'ny lanjany lehibe, izay nananany fironana voajanahary, ary amin'izao fotoana izao dia mampianatra sy manohana ireo izay nahita ny toe-javatra mitovy amin'izany izy.
Vokatr'izany dia nisy ny programa kolotsaina noforonina - Gillian Michaels izay ahitana ny lohateny hoe "No Problem Zones", ary koa ireo "tsilo" malaza, izay miantoka ny fahaverezan'ny fidiram-bola mandritra ny telopolo andro.
Ity fampiofanana ity, karazana fiofanana - sikilezika (fanofanana boribory). Manana fiofanana telo minitra izahay Gillian Michaels, 2 minitra niasana tamin'ny fiaretana ny fo, 1 minitra ho an'ny gazety . Izany no fomba mahomby indrindra handoavana mavesatra sy hampivelatra ny fiaretana, fa koa ny tonelina. Amin'ny fahafahana voafetra (tsy fisian'ny fotoana, toerana, sns) - ity no fomba tsara indrindra hahatratrarana ireo tanjona tena tadiavinao.
Fanazaran-tena Gillian Michaels - Tsy misy olana
Manely ny sandrinay amin'ny lafiny roa izahay - mamakivaky azy ireo eo anoloan'ny tratra. Mivelatra sy mihetsika kokoa ny hetsika - ilaina ny fanalefahana ireo hozatra.
Windmill - miova manaraka.
Sifotra - ny tongony, ny tanana eo amin'ny vatana. Manao fitifirana izahay - ny tongotra dia misy elatra iray isaky ny elatra, ny tanana amin'ny alalan'ireo tsangambato eo ambonin'ilay loha. Miara-mitsambikina isika - ny tongolobe, ny tànana eo amin'ny andaniny midina.
Ny fihodinan'ny fihantsonana - ny ranjony lehibe kokoa noho ny soroka, ny tanana amin'ny tendany, ny lohalika mivalo. Isika dia mamadika ny lakoloha voalohany eo ankavia, avy eo ankavanana, miezaka ny manao amplitude araka izay azo atao.
Miara-miangona, mandohalika, mandohalika ny lohalika. Mametraka ny tanantsika handohalika isika - mamelatra ny lohalinay, manetsiketsika ary manitsy ny ranjonay.
Hiverina indray izahay.
Squeeze - raiso ny toerana fanombohana ho an'ny fanodikodinam-boto - mandaitra ny lohahevitra. Ho an'ny mpangataka - manosika, mandohalika, mametaka eo amin'ny lakroa iray ihany. Ho an'ny olona marobe izay efa nampiofanina - ny fanamafisana ara-pomba mandainga, ny elbows dia mibanjina eo ankavanana, ary mitazona ny loha, ny andilany ary ny tongotra amin'ny andalana iray.
Maka lakolosy izahay - mpikirakira an-gazety. IP - ranjan-tongotra kely kokoa noho ny soroka, fitaovam-piadiana nafatotra teo amin'ny elanelana, fitondra-tanana natsangana tamin'ny loha. Miankohofa izahay, avy eo manongotra ny lohalinay, maninjitra ny tananay izahay. Amin'ny fihanihany - mampihetsi-po, amin'ny fanitarana ny tanana avo - fialana. Ho an'ny mpanjifany - tsy mibontsina lalina tokoa isika, noho ny haavom-pivoarana avo indrindra - eo amin'ny fihodinana ny fehiny mitovitovy amin'ny paroasy.
Push-ups - raiso ny fanamafisana ny lainga. Miverimberina ny tsingerin'ny fiakarana.
Fisakafoanana miaraka amin'ny milina fanontam-pirinty - mamelatra ny tanimboalontsika isika ary mamerina ny fanatanjahantena 8.
Famadihana - fanatanjahantena indray.
Mianjera eo an-toerana - zara raha miala amin'ny tany, miaraka amina rantsana, manova fihetsiketsehana, toy ny rehefa mitsambikina tady.
Avereno atao ny fampiasana 3 - mitsambikina amin'ny mahami.
Miverimberina hoe "mitsambikina amin'ny tadin-tsambo" - fampiharana. 12.
Mipetraka amin'ny gorodona izahay, manofana ny tsiranoka amin'ny tsinay. Miverina eny amin'ny tany, mihintsana ny tongony. Tena manan-danja tokoa fa ny lavaka dia mianjera tanteraka amin'ny tany, tsy misy fiatoana. Tana eo an-damosin'ny loha, miala aina ary miala amin'ny fimenomenonana ny vatana mankany amin'ny lohalika. Jereo ny fotoana rehetra, atsangano ny lohanao, aza manongilana ny tendanao, fa atodiho ny sorokao.
Miondrika eo amin'ny tany, mibontsina ny rambony eo amin'ny tany, mandohalika ny lohalika, manangona ny tongotrao eo amin'ny làlana mahitsy, tongotra miaraka, tanana eo amin'ny vatana. Vetivety dia mihodina eny an-damosiny ary manosika ny tongotr'izy ireo - io hetsika io avy ao amin'ny tany no manapaka ny valizy. Amin'ny hetsika avo lenta, manainga isika, miverina any amin'ny farany ambany - tosika.
Maka lakolosy izahay, manofana ny lamosinay. Ny fampiharana manaraka avy amin'i Gillian Michaels dia antsoina hoe "mandroso" - ny tongony dia somary miondrika, mihetsiketsika manoloana ny tanana, mifandray amin'ny rambony ny tanana, mihetsika ny soroka. Mandrotsaka ny anjomara eo amin'ny tenantsika isika rehefa misintona isika, mamelatra ny tanantsika mba hitsahatra.
Lian-tongotra iray eo anoloana, ny faharoa ambiny - Crochet miaraka amin'ny milina fanontam-pirinty. Ny kitrokely - ny tendron'ilay tongotra eo anelanelan'ny tany, ny lamosina - raha ny marina, rehefa manentsina ny tongotra isika, dia manintona ny sandry miaraka amin'ny lavaka eny amin'ny soroka. Manitsy ny tongotrao, mamelatra ny tananao.
Bow of Batun - tsara sy ratsy
Ravin 'ny goat - loza
Curcuma ho an'ny fahavoazan'ny fahavoazana - ny sakafo matsiro tsara indrindra
Ny holatra Shiitake - tsara sy ratsy
Margarine - tsara na ratsy
Fifadian-kanina amin'ny Bragg
Vitamina ho an'ny diabeta
Oatmeal mirakitra-boalavo ho an'ny fahavoazana
Beach Fashion - Feo 2014
Sakafo marevaka amin'ny ririnina - ny fomba mahavelona indrindra amin'ny sakafo mahavoky
Ireo mpandrindra ho an'ny fahavoazana
Kitapo manga - inona izy ireo ary inona no tokony harahina?
"Ny fikorontanan'ny fototra" 25 taona - mpandray anjara avy eo
Nicole Scherzinger dia nanao dinidinika mivantana tamin'ny gazety Cosmopolitan
Zheltushnik - toetra amam-panahy sy ny fanoherana
Kitapo miaraka amin'ny famonoana kisoa
Ny karazana skandala 20 tsara indrindra Kim Kardashian amin'ny 2016
Hankalaza ny Krismasy any Londona i Janet Jackson sy ny zanany lahy, na dia eo aza ny fihetsiketsehan'ny rainy